आजको राशिफल २०७८ साल भाद्र १० गते बिहीबारGandaki Press
आजको राशिफल २०७८ साल भाद्र १० गते बिहीबार
भदौ १०, २०७८ ०५:०१ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल भाद्र १० गते बिहीबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ अगस्त २६ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार भाद्रकृष्णपक्षको चतुर्थी तिथि वेलुका ५:२२ बजेसम्म, त्यसपछि पञ्चमी रहनेछ ।
मेष : व्यर्थको कार्यमा समय वित्नेछ । अरुले गरेको कार्यको अपजस तपाईँलाई आउनेछ । संचित धन खर्च हुनेछ । गोपनीयता बाहिरिँदा समस्यामा परिनेछ । हतारमा निर्णय नलिई अग्रजको सल्लाहमा कार्य गर्नुहोला ।
मिथुन : व्यापार एवं पशुपानबाट मनग्य नाफा कमाइनेछ । शारीरिक स्फूर्ति कायमै रहला । अवसरहरुले पछ्याउने छन् । दिन उन्नतिकारक रहनेछ । गरेका काम कार्यबाट सन्तोष मिल्नेछ । हर्षको खबर मिल्नेछ ।
कर्कट : विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ । कार्यशैली प्रभावकारी रहँदा नयाँ जिम्मेवारी मिल्नेछ । उत्साह उमंग छाउनेछ । सामाजिक कार्यमा विशेष चासो रहनेछ । कलात्मक कार्यमा मन रमाउनेछ ।